Umbono weMotorola One uza kuboniswa ngoMeyi 15 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Umbono weMotorola One sele unomhla wentetho
IMotorola yenye yeefayile ze- Iimpawu kwi-Android zokujoyina ukusetyenziswa kwe-Android One njengenkqubo yokusebenza. Kunyaka ophelileyo inkampani isishiye neMoto One, i-smartphone yayo yokuqala kunye nohlobo lwenkqubo yokusebenza. Kubonakala ngathi amava ayelungile, ke, inkampani yabhengeza loo nto usebenze kwiifowuni ezintsha ezinolu hlobo. Eyokuqala kubo yimodeli esineendaba ezininzi malunga nayo: iMbono ye-Motorola One.
Kwezi veki bekukho ukuvuza okuninzi malunga nale Motorola One Vision, enkosi esingayibona kuyo Uyilo lwefowuni okanye inxenye yeenkcukacha zayo. Isixhobo esiya kwahluka ngokucacileyo kwezinye iimodeli zohlobo. Ngoku, sele inosuku lwenkcazo esemthethweni.
Njengesiqhelo, uphawu luzinikele ekwenzeni umboniso wezi fowuni eBrazil. Awuyi kulinda ixesha elide, kuba Iya kuba nge-15 ka-Meyi xa le Motorola One Vision izakuvezwa. Ifowuni yesibini yohlobo kunye ne-Android One.Ngaphandle kokuba yeyokuqala enomngxunya kwiscreen.
Ngesi sihlandlo, inkampani iceba ukuququzelela umsitho eSao Paulo. Ngomhla we-15 kuCanzibe ngentsimbi ye-10: 00. Ke kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezimbini siza kuba nayo yonke idatha kule modeli intsha. Khange kuthethwe ngezinye iimodeli, ke ngoku kubonakala ngathi iza kufika yodwa. Nangona kwezi veki bekukho amarhe okuba zingaphezulu iimodeli kolu luhlu. Zizonke izixhobo ezine, njengakwi-Moto G7.
Njengoko besitshilo, kwezi veki bezikhona ukuvuza okumbalwa malunga nalo Mbono weNokia. Ke sele sinolwazi oluninzi ngale fowuni. Ke ngoko, sikuxelela apha ngezantsi kwayo yonke into esele ivuza ngale modeli. Isixhobo esibizwa ukuba sikhokele i-premium yomvelisi ophakathi kuluhlu.
Ukucaciswa kweMotorola One Vision
Umbono omnye weMotorola iya kuba yifowuni yokuqala yophawu ukuba ibe nomngxunya kwiscreen, apho kuya kubakho khona ikhamera yayo yangaphambili. Iya kusebenzisa i Ubungakanani besikrini esili-6,2-intshi, Isisombululo esipheleleyo seHD +. Ukongeza, iya kufika nge-21: 9 ratio, kulandela ngale ndlela ekuvukeni kweefowuni zakwaSony. Kwikhamera yangaphambili, ebekwe kulo mngxunya, kuya kusetyenziswa inzwa ye-12 MP, kunye neferture f / 1.8.
Ngasemva inzwa ye-MP ye-48 isilindele njengeyona iphambili. Khange kuthiwe yeyiphi inzwa ebiya kuba yiyo, ukuba yekaSony okanye eyeSamsung. Njengesekondari, enye ye-5 MP iya kusetyenziswa. Le khamera yesibini kulindeleke ukuba ifundelwe ubunzulu kuphela. Ngokubanzi, ukusebenza kakuhle kulindeleke kwezi khamera kwisixhobo.
Ngaphakathi, njengoko yayisele ivuza, Umbono omnye we-Motorola uza ne-Exynos 9610 ye-Samsung. Ke luphawu lokuqala ukusebenzisa enye yeeprosesa zeSamsung. Sifumana iinguqulelo ezahlukeneyo ze-RAM kunye nokugcinwa. Kwi-RAM kukho iinguqulelo ezimbini esele ziqinisekisiwe, i-3 kunye ne-4 GB. Ngelixa ukugcinwa sinokulindela i-32, 64 kunye ne-128 GB. Zonke zinokwandiswa nge-microSD. Kwibhetri, kulindeleke umthamo we-3.500 mAh, kunye nokutshaja ngokukhawuleza kwe-27W. Ke ngoko, isiqingatha sebhetri sihlawulisiwe kwimizuzu engama-20 kuphela.
IMoto G7 kunye neMoto G7 Plus: I-Motorola ihlaziya uluhlu lwaphakathi
Ifowuni kulindeleke ukuba ivule ngemibala eyahlukeneyo. Ukuza kuthi ga ngoku i-shades ezimhlophe, ezimnyama kunye ezimdaka ziqinisekisiwe. Kodwa ayinakukhanyelwa ngaphandle kokuba kukho ezinye iindlela onokukhetha kuzo. Ngomhla we-15 kaMeyi siya kuba namathandabuzo malunga nale fowuni intsha Kwintengiso. Uninzi lwamajelo eendaba asisayi kwazi iMbono eNye kuphela ye-Motorola. Sinokubona ezinye iifowuni kumsitho, nangona inkampani ingakhange ithethe nto. Kunokubakho imodeli yamandla, kunye nebhetri enkulu. Nangona kuya kufuneka silinde kwezi ntsuku ukuze sazi ukuba akukho nyani na kula marhe. ¿Ucinga ntoni ngale modeli intsha yophawu? Ngaba iya kuphumelela phakathi kuluhlu oluphakathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Umbono weMotorola One sele unomhla wentetho
I-Realme 3 ngoku isemthethweni: Iyavela kwiwebhusayithi yophawu
Umsebenzi omtsha wokungena yonke imihla kwii-Noodlecake's Stealth Ops